Wasaaradda Waxbarashada oo Digniin u jeedisay Ardayda reer Somaliland ee wax ka barata magaalada Maqalle - SomalilandPost
Home News Wasaaradda Waxbarashada oo Digniin u jeedisay Ardayda reer Somaliland ee wax ka...
Wasaaradda Waxbarashada oo Digniin u jeedisay Ardayda reer Somaliland ee wax ka barata magaalada Maqalle
Hargeysa (SLpost)- Wasaaradda warxbarashada iyo sayniska Somaliland ayaa ka hadashay ardaydii waxbarashadu uga socotay gobolka Tigreyga ee dalka Itoobiya, kuwaas oo qaarkood iyaga oo aan soo wargelin wasaaradda ay dib ugu noqdeen gobolkaas.
Warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland, ayaa u qornaa sidan:-“Sida aad la wada socoteen, waxa jiray arday reer Somaliland ah oo waxbarasho Jaamacadeed u joogay dalka aynu jaarka nahay ee Itoobiya, gaar ahaan gobolka Tigrey ee ay dagaalladu ka dhaceen, Ardaydaas oo dedaal dheer kadib la soo daadgureeyey, iyaga oo bedqabana ku soo guryo noqday dalkooda hooyo ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Waxa aannu xog sugan ku helnay in hal arday oo ka mid ah ardaydaasi uu dib ugu ambabaxay magaalada Maqalle ee gobolka Tigrey.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay u aragtaa in ardaygaasi uu ku kacay fal aan loo baahnayn.
Sidaa daraadeed, Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay ku wargelinaysaa dhammaan ardayda wax ka baranaysay Jaamacadaha gobolka Tigrey ee hadda ku sugan Somaliland:-
1. In aanay ku noqon karin Jaamacadaha magaalada Maqalle ilaa ay oggolaansho rasmi ah ka helaan Wasaaradda Waxbarashada Jamhuuriyadda Somaliland .
2. In ardayda u hoggaansami weyda awaamiirta Wasaaradda Waxbarashada laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan.
Ugu danbayn, waalidiinta ardaydaasi waxaanu ku wargelinaynaa in aanay Wasaaradda Waxbarashadu masuul ka ahayn bedqabka carruurtooda haddii ay amar la’aan baxaan.